Lahatsoratra momba an'i Kolombia
Banky tsara indrindra any Kolombia
Enga anie 6, 2022 Demi Banks, Kolombia
Ny sasany amin'ireo banky tsara indrindra any Kolombia dia: Bancolombia Banco de Bogota BBVA Davivienda Banco del Occidente Kolombia ny sehatry ny banky dia misy banky 25 misy sampana 6000 eo ho eo ary ATM 20,000. Ny politikan'ny vola sy ny fifanakalozana vahiny any Kolombia dia tantanan'ny
Fitaterana any Kolombia
Enga anie 2, 2022 Demi Kolombia, mandehana
Ny zotra an-dalambe no fitaovam-pitaterana ; Ny 69 isan-jaton'ny entana dia entina amin'ny lalana, raha ampitahaina amin'ny 27 isan-jato amin'ny lalamby, 3 isan-jato amin'ny lalan-drano anatiny, ary 1 isan-jato amin'ny rivotra. Fitaterana any Kolombia Ireo no be indrindra
Fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Kolombia
Enga anie 2, 2022 Demi Kolombia, Travel
Kolombia ekoatera dia manana toetrandro ekoatera ary noho izany dia tsy manana fiovana manaitra vanim-potoana; na izany aza, ny fotoana sasany amin'ny taona dia mety ho tsara kokoa noho ny fitsidihan'ny hafa. Ho an'ny orana kely indrindra, ny fotoana tsara indrindra hitsidihana azy dia eo anelanelan'ny
Ahoana ny fomba hifindra-monina any Kolombia avy any Venezoelà?
Jolay 29, 2021 Demi Kolombia, mpitsoa-ponenana, Venezoeliana, visa
Ny fifantohana ambony indrindra amin'ny fifindra-monina Venezoeliana dia any Kolombia, Peroa, ary Silia. Araka ny fantatrao angamba fa ny fivoarana ara-politika, zon'olombelona, ​​ary ny fampandrosoana ara-tsosialy ao amin'ny Repoblika Bolivariana ao Venezoela (aorian'i Venezoelà) dia nahatonga ny fialan'ny mihoatra ny
Ahoana ny fomba fangatahana fangatahana fialokalofana any Kolombia? Fantaro eto!
Septambra 5, 2020 Demi Kolombia, mpitsoa-ponenana
Mbola mijanona i Colombia mandritra ny ady an-trano. Amin'izay Kolombiana maro no matahotra ny hiverina. Miady amin'ny vondrona ny governemanta. Toy ny FARC sy ny Tafika Revolisionera ho an'ny Fahaleovan-tena (ELN). Raha nanao ezaka be ny governemanta hanatsarana ny
Toeram-pitsaboana any Kolombia
Aprily 30, 2020 Shubham Sharma Kolombia, fahasalamana
Ny fikarakarana ara-pahasalamana any Kolombia Serivisy serasera fahasalamana any Kolombia dia fifandanjana amin'ny kalitao avo lenta, fidirana amin'ny fidirana, ary lafo indrindra. Ny serivisy fikarakarana ara-pahasalamana any Kolombia dia laharana faha-22 an'ny World Organization Organization (WHO). Ny serivisy fitsaboana Kolombiana nodinihina
Asa any Kolombia? Fantaro ny rafitra momba ny asa any Kolombia!
Aprily 22, 2020 Demi Kolombia, asa
Ny kolontsaina tsara tarehy sy tany samihafa any Kolombia. Misintona mpizahatany avy eto amin'izao tontolo izao izy ireo. Tsy resaka fivezivezena fotsiny ity. Saingy toerana tokony hitoeranao ihany koa. Ary mila famonjena na asa ianao, raha te ho velona ianao. Aoka ho fantatrao
Inona no fepetra takiana amin'ny visa ho an'i Kolombia?
Aprily 15, 2020 Demi Kolombia, visa
Ny fizotran'ny visa ho an'i Kolombia dia mora azo kokoa. Ny fizotry ny fangatahana dia an-tserasera ary ny visa dia elektronika ho an'ny mpandeha rehetra. Satria efa vita an-tserasera izao ny dingana manontolo mba hahafahanao manatanteraka ny manontolo
Torohevitra fitaterana ho an'ny mpandeha any Kolombia
March 15, 2020 Shubham Sharma Kolombia, mandehana
Kolombia, firenena iray any amin'ny tapany avaratry Amerika Atsimo. Tsara ny fitaterana any Kolombia izay zakan'ny Ministeran'ny Fitaterana ary saika misy loharanom-pitaterana rehetra misy. Ny fomba fitaterana tena tiana indrindra